Micnaha dhagaxa Amethyst. Had iyo jeer u isticmaal jaakadaha sida giraanta, qoorta, hilqado
Tags Ametustos, Quartz
Ka iibso dukaankayga amethyst dabiiciga ah
Micnaha dhagaxa Amethyst. Amethyst-ka waxaa badanaa loo adeegsadaa dahabka sida garka, silsiladka, hilqado, jijin, iyo pendant. Sidookale hel dhagax, geode, cluster, guluus
Amethyst-ka dabiiciga ahi waa midab buluug ah oo midab kala jaad ah oo ah quartz kirismas ah. Waxay leedahay midabkeedu midabkeedu yahay 'violet' sababta oo ah sunta dabiiciga ah ee wasakhda birta. Xaaladaha qaarkood iyada oo lala kaashanayo waxyaabaha kumeelgaarka ah ee ku meelgaarka ah. Jiritaanka walxaha raadku waxay keenaan beddelaado isku-dheellitiran oo isku-dheellitiran oo isku-dhafan Sidoo kale, adkaanta macdanta ayaa la mid ah sida kilz. Sidaa daraadeed waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo dahabka qiimaha la bedeli karo.
Ammystuhu gemstone wuxuu ku dhacaa ubaxyada ugu horreeya. Laga soo bilaabo violet midab khafiif ah oo guduud ah illaa guduud. Waxay soo bandhigi kartaa mid ama labadaba aragti sare: casaan iyo buluug. Siberiya, sidoo kale Sri Lanka, Brazil iyo Aasiya ayaa ah isha miinada ee noocyada ugu fiican. Siberian-weyne waa magaca fasalka ugu habboon. Waxay leedahay muuqaal buluug ah oo u eg 75 / 80%, oo leh buluug 15 / 20%. Waxay kuxirantahay isha iftiinka. Quartz cagaaran sidoo kale waxaa loo yaqaan si qaldan ametustos cagaaran. Maaha magac ku habboon dhagaxa. Ereyada saxda ah waa prasiolite. Magacyo kale quartz cagaaran waa vermarin or liin macmacaanka.
Midabka asalka ah ee amethyst waxaa badanaa la dhigaa. Laga soo bilaabo jilibka is barbardhigaan wajiyada finalka ee kore. Sidoo kale, hal dhinac oo farshaxanka ah ee lafidary waxaa loola jeedaa si sax ah u goynta dhagaxa. Goobta midabku waxay ka dhigaysaa midabka muraayadda dhameeystiran. Badanaa, lakabka dusha sare ee khafiifka ah ayaa ka jira dhagaxa. Midabku ma aha mid isku dhejisan oo loo gooyo si adag.
Midabku waa natiijada beddelaadda ka dhalatey macdanta birta ah (Fe3 +) ee siliconka dhismaha. In ay joogaan xubno raad ula mid ah ionic ballaaran weyn. Sidoo kale illaa xad, xajmiga quartz ayaa si dabiici ah uga dhalan kara barakaca kala-guurka. Qalabka xitaa haddii xoogga yaraanta birta uu yaryahay. Dhagaxa dabiicigu waa dichroic oo ah guduud guduudan iyo violet buluug. Laakiin marka la kululeeyo, waxay noqotaa huruud ah-casaan. Waxay sidoo kale tegi kartaa tufaax-jaalle ah, ama brownish madow. Waxay isku mid noqon kartaa citrine, laakiin lumiyo diirkadeeda, si ka duwan sida dhabta ah citrine.
Amnesyst Gemme wuxuu ku waayi karaa codka marka uu ku badan yahay ilaha iftiinka. Waxa kale oo lagu madoobi karaa in si dabiici ah loogu madoobaado cirbad ku filan.
Micnaha Amethyst, awoodaha, faa'iidooyinka, bogsashada & sifooyinka astaamaha
Amethyst waa dhagaxa ilaalinta ruuxiga iyo isdaahirinta, nadiifinta goobta tamarta qofka ee saameynta xun iyo waxyaabaha ku lifaaqan, iyo sidoo kale abuurista gaashaandar iftiinka ruuxa ku wareegsan jirka. Waxay u shaqeysaa sidii caqabad ka hor tagga tamarta hoose, maskaxda, jahwareerka gelatathic iyo bey'adaha aan caafimaadka qabin.
Amethyst waa dhagax madadaalo leh oo waa dhalashada dhaqanka ee Febraayo.
Ametustos, ka Ratanakiri, Cambodia
Waxaan ku dhaqannay dahab qurxin ah sida birta, qoorta, hilqado, silsilad, iyo pendant. Runtii waa aroos caan ah oo loo yaqaan 'ring ring for ragga', giraan dahab ah, ama lagu dhejiyay giraan dheeman ah
Quater kaluunka Koi
Tags Kalluunka Koi, Quartz
Quartz oo leh marcasite
Qudaarta dahabiga ah ee wareega leh hematite
Tags Hawk isha, Quartz